Ke kaloku - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguElio
UElio ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu yestudio yabantu abadala ababini abanabo bonke ubutofotofo abanokufikelela ngokuzimeleyo kwindlu endala ehlaziyiweyo. Indawo ezimnandi zokuba kakhulu na lokuhlambela kunye ishawa kunye bidet, ikhitshi kunye ifriji, isitofu, microwave liziko lezonka, nokuba zonke izixhobo zokupheka kunye okudlela (nawe uya kufumana yonke into oyifunayo sakusasa), ibhedi ekhululekile ibhedi kabini (kunye namathuba ibhedi yomntwana), i-wi-fi kunye nomabonwakude. Iibha, iivenkile zokutyela, iivenkile kunye neenkonzo ezibalulekileyo e-mt. 500.
Indlu, iyafikeleleka ngeenyawo kwa-m. I-150 ukusuka kwindawo yokupaka iimoto, ibekwe kwilali encinci kunye neyothuleyo yeentaba iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwi-ski lifts (Ala di Stura - Balme) kunye ne-skiing yelizwe (Ala di Stura - Pian della Mussa - Groscavallo - Forno Alpi Graie), ibhayikhi irenti, ehamba kunye nokunyuka ezintabeni, benyuka ejimini kunye kumadanyana yangaphandle; kunye nokuba lubalaseleyo ekuphumleni, lufanelekile njengesiseko sohambo olude kuzo zonke iiNtlambo zaseLanzo. Ifikeleleka ngemoto okanye ngololiwe / ngebhasi ukusuka kwisikhululo esikufutshane se-GTT, isikhululo seenqwelomoya saseCaselle Torinese kunye ne "Reggia" yaseVenaria Reale kumgama oziikhilomitha ezingama-30.
Indawo yokuhlala inomnyango ozimeleyo kwaye iindwendwe zingasebenzisa indawo ekwabelwana ngayo yangaphandle ehlotyeni.
Izixhobo zokulungisa/ukugcina iibhayisekile ziyafumaneka.
Yaneleyo yokupaka free kwi mt. 150 ukusuka kwindlu.
Ngena emva ko-15:00 - Phuma ngo-10:00.
Mna nonyana wam u-Alberto sihlala kwindawo ezimeleyo yendlu kunye neekati zethu ezi-2 kunye nenja yethu uTessa kwaye siyafumaneka kuzo zonke iimfuno okanye ukukunika ulwazi ngemisebenzi emininzi ekufuneka yenziwe ezintlanjeni.